Dawladda Turkiga oo wadahadaladii Somaliland iyo Somaliya u qabanaysa Madax dhaqameedka labada Dal Toddobaadka soo socda. |
Dawladda Turkiga oo wadahadaladii Somaliland iyo Somaliya u qabanaysa Madax dhaqameedka labada Dal Toddobaadka soo socda.
Hargeysa(GNN) warar hordhac ah oo laga helayo wadahadaladii joogsaday ee Somaliland iyo Somaliya ayaa la sheegayaa inay Dawladda Turkigu doonayso inay Toddobaadka soo socda bilowdo, iyadoo u dhigaysa waji ka duwan kii hore ee labada Dawladood ay u qabatay.
Inkasta oo aanay jirin war ka soo baxay dhinacyada ay khusayaa, hadana waxa ifafaale ka soo baxay socdaal uu dhawaan ku imanyo Somaliland iyo Somaliya ergayga u qaabilsanaa wadahadaladaas la filayaa in uu kula kulmo Salaadiinta labada Dal.
Ilo wareed u dhuun daloola qorshaha Dawladda Turkigu wado ayaa sheegaya in Ergayga dabada ka riixaya hawshani ku soo horayn doono muqdisho, halkaas oo uu kulankiisa ugu horeeya kula yeelan doono Madax dhaqameedka Somaliya, kadib na uu u soo gudbi doono Hargeysa oo loogu sii diyaariyey kulan kaas la mid ah.
Lama oga ujeedada rasmiga ah ee ka danbaysa kulamadani inay la xidhiidho siyaasiyiinta labada Dali nay isaga riixeen dhinaca dhaqanka iyo inay Dawladda Turkigu u aragtay inay tahay Gol-jilicda ay ka gali karto ka midho dhalinta qorshaheeda wadahadalada oo ka socon waayey dhinaca siyaasiyiinta.
Somaliland ayaa hore u sheegtay inay ka baxday wadahadaladii kadib markii ay ku eedaysay inay Dawladda Somaliya jabisay qoddobadii halbawlaha u ahaa wadahadalka, inkasta oo kulan dhawaan dhicisoobay oo ka dhacay Turkiga lagaga wadahadlay dhinaca Hawada, kaasoo aan sii dhaqayn.
Dawladda Turkiga ayaa xafiiskeeda Hargeysa ku bixisa Fiisaha Dalkeeda, waxaanay siisaa dadweynaha iyo madaxda doonaya inay dalkeeda u safraan, inkasta oo ay ku xidho aqoonsiga muwaadinimo ee Somaliland, hadana waxay ku bixisaa baasaaboorka Somaliya oo ah ka ay aqoonsan yihiin.